China Waste Taia ndinuak Equipment factory na-emepụta | LYBH
Ugboro abụọ-osisi shiee crusher
Onye nwere ọgụgụ isi igwe na-akpụ nkọ nke abụọ nwere ọgụgụ isi nwere njirimara nke obere ọsọ na nnukwu torque, nke nwere ike ịkụda taya mkpofu nke nha niile ma hụ na arụmọrụ nke ogologo oge nke akụrụngwa ahụ. A na-eji ngwa igwe dị elu eme ihe site na Europe, a na-ejikwa ihe eji arụ ọrụ nke okpukpu abụọ eme ihe na-agbanwe agbanwe, nke na-eme ka usoro ntinye nke ngwa ngwa ahụ dịkwuo mma. Adighi -aga ndinuak na ezi ndinuak na-esichara dị iche iche ọtọ ebe ke otu mma igbe n'otu oge iji chekwaa oriri ike ma jiri ohere.
Onye na-ekewa waya
Site na mma na-agagharị na mma edozi iji belata ngọngọ gluu, ihe ruru eru nke roba na waya nchara site na myọ ahụ, irighiri roba na waya nchara na-aga n'ihu na-anọ na ebe a na-etipịa maka imebi; Ihe mmechi na mmechi hydraulic n'etiti igbe na Ihuenyo na-eme ka mmezi na ngbanwe nke ịcha ihe na ntanetị dị mfe. N ihu ihu na azụ nke mma na-akpụ akpụ na mma dị mma nwere ike ịghọta mgbanwe nke ụzọ mbepụ anọ ma melite ndụ ọrụ nke ngwa ọrụ. ịcha, ọ ka nwere ike iji ya rụọ ọrụ.
Ejiri ihe eji eme ihe na-eme ka ihe dị iche iche dị na ngwongwo ahụ rụọ ọrụ, nke nwere ike izute mgbochi mmebi iwu nke ọrụ ogologo oge nke akụrụngwa n'okpuru gburugburu ebe obibi pụrụ iche dị ka mmetọ ahihia. Ọ nwere ọgụgụ isi akara ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka ime mmalite na-akwụsị, mberede na-akwụsị, ọsọ na bufee.
Site na iji na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke diski inyefe iche iche ihe nke dị iche iche nha n'ihi na ihe onwunwe echetakwa, na underscreen nwere ike nweta site ukpụhọde ọdịiche nke diski izute chọrọ nke ịrụzu urughuru size. The overscreen na ada ada izute ihe ndị a chọrọ ga-laghachiri ndinuak usoro maka re-ndinuak ruo mgbe ọ na-ezukọ na chọrọ nke ihapu urughuru size. A na-eji diski polymeric mejupụtara diski ahụ nke na-adịghị mfe mmebi ma enwere ike iji ya rụọ ọrụ niile. N'otu oge ahụ, ezi uche dị na modular imewe na mgbanwe ọnọdụ nke njikwa ikike ukpụhọde, nke mere na ihe onwunwe na echekwara usoro bụ obere yiri ka ha ga-akpọkọtara ma ọ bụ asọfe, akụrụngwa mmezi dị mfe na ngwa ngwa.
The ụdị nke magnetik separator bụ na-adịgide adịgide magnet onwe-ịrụzu ụdị, nke nwere ike n'ụzọ dị irè enyocha ígwè waya mgbe nkewa.
A na-ekewapụ waya nchara site na nnukwu mgbochi roba / waya nchara site na ịma jijiji. Naanị nchara nchara waya roba urughuru / ntụ ntụ na-ezute ihe ndị a chọrọ nwere ike ịgafe na ihuenyo n'okpuru ihuenyo vibrating. A na-ebugharị nnukwu granulu roba nke na-enweghị ike ịgafe sieve na waya nchara ọzọ site na onye na-ebu belt na onye na-ekewa ígwè waya maka ikpochapu nke abụọ ruo mgbe ọ ruru ọkọlọtọ.
Isi akara kabinet na akara n'elu ikpo okwu bụ onwe ha na onye ọ bụla ọzọ. Nhazi nke ihuenyo mmetụ na njikwa akara bọtịnụ na-eme ka njikwa njikwa na-eme ka ọ dịkwuo mfe ma dị mfe ịrụ ọrụ. Akpaka mode nwere ike na-aghọta unmanned ọrụ, ntuziaka mode nwere ike ịchịkwa otu ngwaọrụ, ọrụ nwere ike ịhọrọ dị iche iche ụdịdị na-arụ ọrụ dị ka mkpa n'ezie n'oge ọ bụla. N'otu oge ahụ, sistemụ ahụ nwekwara ụda olu na ọkụ, ihe ncheta a na-ahụ anya, ncheta mmezi akụrụngwa na ọrụ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi, nke mere na ndị ọrụ nọ n'usoro akụrụngwa na-ejikwa ngwa ngwa na ngwa ngwa, ịchọta oge na mmejọ, mezue mmezi ahụ. ọrụ. Ngwaọrụ nleba anya vidiyo zuru ezu nwere ike ikwurịta okwu na sistemụ njikwa etiti yana nyochaa ọnọdụ ọsọ nke akụrụngwa na oge.
1.Modular imewe, obere akara ukwu
Ngwa akụrụngwa na-agbaso ụkpụrụ nke iji ala eme ihe n'ụzọ ziri ezi ma kpụ ọkụ n'ọnụ, na-agbaso usoro ihe owuwu nke nchikota nke okpukpu abụọ na-atụgharị akụ na ihe mgbanaka mgbanaka ahụ, na nhazi ezi uche dị na ya, nke nwere ike ọ bụghị naanị ijide na nhapụta na nhapu oke ga-ezute chọrọ, kamakwa izute atụmatụ na mkpa ụlọ nke mkpofu mkpofu nke ndị ahịa na njikwa ya.
2.Integral mma ikpe imewe, mụ na a pụrụ ịdabere na ya
Mgbe ọgwụgwọ ọkụ gasịrị, igbe ngwongwo ahụ siri ike ma na-eguzogide ya, nke na-eme ka ike dịkwuo mma, na-agbatịkwu ndụ ọrụ nke akụrụngwa ahụ, ma na-ebelata mmezi mmezi.
3. ofu mma onwe ha kemwepu, ike na-eguzogide eguzogide
Enwere ike ịtọpụ onye ọ bụla edozi ya ma tinye ya n'adabereghị, nke nwere ike gbasasịa ma mechaa ngwa ngwa n'oge dị mkpirikpi, na-ebelata oke ọrụ nke ndị ọrụ ma melite ọganihu nke mmepụta.
4.Unique tool tool, mfe iji chebe ma dochie
5.High spindle ike, ike ọgwụgwụ ike ọgwụgwụ na mmetụta na-eguzogide
A na-eji spindle mee akwa spindle. Mgbe ọtụtụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ na nhazi nhazi dị elu, ọ nwere ezigbo ike igwe, ike gwụrụ ike na ikike mgbochi na ndụ ogologo ndụ.
6.Ibubata a na-ebubata na ọtụtụ akara akara
Mbubata na otutu ngwakọta akara, nguzogide ibu dị elu, ndụ ogologo oge, uzuzu ikuku, mmiri na-egbochi mmiri na antifouling, iji hụ na igwe na-aga n'ihu ma kwụsie ike.
d. Mgbawa siri ike: ihe siri ike mgbe pyrolysis bụ obere carbon na ígwè nchara nke nwere ike ịmalite ma ọ bụ ree ya
ozugbo na uru ọ bara.
Nke gara aga: Imefusị Plastic ndinuak Equipment
Osote: Carbon Black egweri akụrụngwa
Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Ogbe Pyrolysis Osisi, Imefusị rọba, Imefusị Taya Recycling Machine, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Taya Pyrolysis,